Madaxweynaha dawladda Puntland oo qasriga Madaxtooyada ku qaabilay wufuud ka kala socotey Hay’adaha GIZ iyo World Vision. – Radio Daljir
Maajo 24, 2016 9:43 g 0
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shalay galab 24-May-2016 Hoygiisa qasirga Madaxtooyada dawladda Puntland ee Garoowe ku qaabilay Madax ka socotey hay’adda Jarmalka u qaabilsan mashaariicda horumarinta ee GTZ iyo World Vision.
Mas’uuliyiintii ka socdey Hay’adda GTZ oo ah hay’adda fulinaysa Mashruuca dhismaha iyo dayactirka waddada isku xirta magaalooyinka Garoowe iyo Gaalkacyo ayaa Madaxweynaha uga warbixiyey halka uu marayo mashruuca dhismaha iyo dayactirka waddadaasi, isla markaana waxa ay sheegeen in dhismaha waddada ay bilaabi doonaan bisha September 2016-ka soona geba-gebayn doonaan bisha September 2017-ka.
Hay’ada GTZ ayaa sidoo kale ballan qaaday in ay tayayn doonaan korna u qaadi doonaan xirfadlayaashaa ka hawlgala hay’adaha dhismaha wadooyinka Puntland oo ay ka mid tahay hay’adda waddooyinka Puntland ee NESHA si waayo aragnimadooda loo kocbiyo.
Madaxweynaha Dawlada Puntlanda ayaa dawladda Jarmalka ku ammaanay dedaalka ay ugu jirto dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha Puntland isla markaana waxa uu sheegay in ay garab taagnaan doonaan lana shaqayn
(DHAGEYSO) Warka Fiidnimo ee Radio Daljir (Xarunta Gaalkacyo)